बाल उत्सवको अपेक्षा « Loktantrapost
बाल उत्सवको अपेक्षा
२९ माघ २०७३, शनिबार १५:१०
नेकपा एमालेको आयोजनामा मेचीनगरमा फागुन ९ गतेदेखि ३ दिने बाल उत्सवको आयोजना हुँदैछ । स्कुल उत्सवका रुपमा लिएर सञ्चालन गर्न लागिएको उत्सवलाई भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि आयोजक समिति अहोरात्र लागि परेको छ । यस क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको उत्सवले विद्यालय जानबाट बञ्चित बालबालिकालाई समेत स्कुले सिकाई यात्रामा प्रवेश गराउने लक्ष्य राखेको छ । बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि पढाइमा रुचि बढाउने र उनीहरूमा भएको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । ३ दिनसम्म सञ्चालन हुने उत्सवमा समाज, राजनीति, शिक्षा सम्बन्धी विषयहरूमा गहन छलफल हुनेछन् । पठन संस्कृति र हाम्रो शिक्षा नीतिका विषयमा पनि परामर्श चल्नछन् । जसरी होस् बालबालिकाको सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मकको सर्वाङ्गीण विकास गराउनका लागि यो उत्सव कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको आयोजना भएको प्रथम स्वास्थ्य महोत्सव सम्पन्न भएको ठिक एक महिनाको अन्तरालमा एमालले बाल उत्सवको आयोजना गर्दैछ । यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो । सामाजिक क्षेत्रमा रहेर जनताको काम गर्न लागि परेका राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा तिनै जनताको हित हुने किसिमका काम गर्नु आफैँमा एउटा उदाहरणीय र प्रशंसनीय काम हो । राजनीति र त्यसका नेतादेखि आजित भएका आम नेपालीका लागि यी र यस्ता महोत्सवले राहत प्रदान गरेको छ । राजनीतिक दल भनेको चुनावका बेला भोट माग्ने र जनता भोटका बाकस हुन् भन्ने मान्यतालाई अन्त्य गरिदिएको छ । नेपालको सुदूरपूर्वी जिल्ला झापा त्यसमा पनि भारतसँग सीमा जोडिएको मेचीनगरबाट सुरु गरिएको यो अभियानले पश्चिम महाकालीसम्म पुग्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र आम नेपालीका लागि राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूप्रति आशाको किरण पलाउँछ ।
यो क्षेत्र आफैमा शिक्षित र सभ्य मानिस रहेको क्षेत्र हो । यसमा राजनीतिक आस्था जो कोहीमा होला तर, सामाजिक कामका लागि यहाँका जनता एक हुन पनि तयार छन् भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् । २०७२ साल बैशाखको महाभूकम्पका बेला मेचीनगरका राजनीतिक दलले गरेको कामको सिङ्गो राष्ट्रका लागि एउटा नयाँ सन्देश थियो । यहाँ हरेक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सक्षम र सवल मानिसहरूको जमघट छ । खेलकुदका क्षेत्रमा होस या राजनीतिक क्षेत्रमा । शिक्षाको क्षेत्रमा होस् या सञ्चारको । जहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि सफल नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य महोत्सवको अवधिभर त्यसका गतिविधिलाई बाहिर ल्याउनका लागि म निरन्तर लागेको थिएँ । ७ दिन सञ्चालन भएको महोत्सवका हरेक दिन नयाँ विषय वस्तुमा यस क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्काे गरेँ । राम्रो कामलाई सबैले राम्रै भन्छन् । हरेक दिनका रिपोर्टमा फरक राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको भनाइलाई बाहिर ल्याएँ । सबैले सकारात्मक कामको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । त्यो देखेर काङ्ग्रेसका एक जना नेताले मलाई के भन्नु भयो भने– ‘देबु भाई यो महोत्सव काङ्ग्रेसले गरेको कि अन्य पार्टीले ? हाम्रो फोटो पत्रिकामा आउनु पर्ने तिमीले त अरु राजनीतिक दलका नेताको फोटो पो झ्याम झ्यामी हाल्छौ त ? काम गर्ने कालु मकै खाने भालु झैँ भयो त ?’
मैले उहाँलाई मलिन स्वरमा भने–‘दाई काम त तपाईहरूले नै (काङ्ग्रेस) गर्नु भएको हो । आफैले काम गर्ने आफ्नै फोटो पत्रिकामा हाल्ने हो भने त नेपाली उखान ‘कसैले तपाई भनोस् या नभनोस् आफैँ मपाइँ भए झैँ’ भएन र ?’
फेरी उहाँले थप्नु भयो– ‘हैन तिमी काङ्ग्रेसको मान्छे हो कि ? एमाले माओवादीको ?’
उहाँको कुरा सुन्दा आफैँलाई हाँसो लाग्यो । दाई म पत्रकार हो । मेरो पत्रकारिताको कलम कुनै आस्था विशेषले चल्दैन ।’ उहाँलाई मसँग के को रिस उठ्यो कुन्नि ? फेिर उहाँले ममाथि आव्रmोस पोख्नु भयो । ‘अब म पार्टीमा यो कुरा राख्छु ।’
त्यसपछि उहाँले के गर्नु भयो ? के भन्नु भयो ? मैले कुनै खोजी नै गरिन । पत्रकार रविन्द्र मिश्रको भाषामा भन्ने हो भने पार्टीभित्र पात्र होइन, प्रवृत्तिमा परिर्वतन आउनु पर्यो । सोचमा परिवर्तन हुनु पर्यो ।
स्वास्थ्य महोत्सव र बाल उत्सवको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जुहारी चलेको हेर्छु । त्यहाँ लेखिएका शब्दहरूले आफैँलाई असहज बनाउने गरेको छ । काङ्ग्रेसका साथीहरू हामीले स्वास्थ्य महोत्सव गरेपछि एमालेलाई धक्का लागेर त्यसको बदला बाल उत्सव गर्न लागेको भन्छन् । एमालेका साथीहरूले हामीले पहिले नै सोच बनाएका थियौँ तर समय अभावले गर्न नसेकेको र त्यसको सुइँको पाएर स्वास्थ्य महोत्सव गरे भन्छन् । तर, हामीले वास्तविकताभित्र पस्न सकेनौँ । यहाँ स्वास्थ्य महोत्स होस् या बाल उत्सव । बृद्धा महोत्सव होस् या तन्देरी महोत्सव । जुन या जेसुकै महोत्सवको आयोजना गरे पनि त्यसको फाइदा यिनै जनताका लागि हो भन्ने हेक्का राख्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ ।
आज आर्थिक अवस्थाका कारण अस्पताल समेत टेक्न नपाएका हजारौँ यस क्षेत्रका जनताले आफ्नै आँगनमा आएका विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग भेटेर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउने अवसर पाए । साना बालबालिकादेखि बृद्धासम्मले यसको सेवा लिए । त्यहाँ आयोजक काङ्ग्रेस होस् कि एमाले, माओवादी होस् कि राप्रपा । एउटा गरिब मान्छेलाई रोग लाग्दै गर्दा यो एमाले हो यसलाई रोग लाग्छु, यो एमाले हो यसलाई लगाउँदिन । यो त प्रधानमन्त्रीको पार्टीको मान्छे रहेछ । रोग लाग्नु हुँदैन भन्दैन होला । रोगले सानो ठूलो वा एमाले काङ्गेस, माओवादी, यो जाति त्यो जाति नभनी आव्रmमण गर्छ । यसैले हामीले पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर आम जनताको हितमा लाग्ने हो भने समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न किन सकिदैन र ? तर, बिडम्बना के भइदियो भने, एउटा पार्टीको मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने अर्काे रमिते बन्ने । अनि अर्काे कुनै पार्टीले राम्रो काम गर्न थाल्यो भने कसरी हुन्छ त्यसलाई बिफल बनाउन खोज्ने । अनि कहाँबाट हुन्छ समृद्ध नेपाल । कहाँबाट हुन्छ सुन्दर देशको परिकल्पना ।
जसरी स्वास्थ्य महोत्सव भव्य रुपमा सम्पन्न भयो । अब त्यसैगरी बाल उत्सव सफल हुनु पर्छ । अनि मात्र हामी मेचीनगरबासी हुनुको गौरव बढ्छ । यहाँ आयोजक जुनसुकै पार्टी होस् त्यसको कुनै प्रवाह नगरी त्यसबाट के लाभ लिन सकिन्छ त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । २१ औँ शताब्दीमा रहेका शिक्षित हामी जनताले अब पुरातनवादी सोच र मान्यतालाई राखेर पार्टीगत स्वार्थमा चुर्लुम्म हुने हो भने आउँदो पुस्ताले के सिक्ने ?
नौ दिनपछि सञ्चालन हुने यो उत्सवमा धेरै भन्दा धेरै यस क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक तथा नीजि विद्यालयका विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर उनीहरू भित्र रहेका प्रतिभालाई उजागर गर्न सक्नु पर्छ । कक्षाकोठाको पढाइले मात्र बालबालिकाको चौतर्फी विकास हुन सक्दैन । राम्रो पढ्ने विद्यार्थी भोलि राम्रै अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण त होला तर, यो समाजसँग घुलमिल भएर सामाजिक क्षेत्र तथा अतिरिक्त व्रिmयाकलापमा सहभागी हुने मौका पाएको छैन भने त्यो जतिसुकै राम्रो भए पनि सुईबाट निकालिएको बोइलर कुखुरा जस्तो मात्र हुन्छ । उसले न त यो समाज बुझेको हुन्छ न त कुनै क्षेत्रमा अघि नै बढ्न सक्छ । यदि उसले पढ्न सकेन भने कमसेकम बाहिरी वातावरणमा समायोजन भएर बाँच्न त सिक्छ । त्यतातर्फ पनि हाम्रा विद्यालयहरू लाग्न जरुरी छ ।
यसैगरी बाल महोत्सवले सबै किसिमका बालबालबालिकाको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्नुपर्छ । यहाँ चिया बगानको मालिकको छोरा र त्यही बगानमा काम गर्ने सामान्य मजदुरको छोराबिचको खुसी एकनासको बनाउन सक्नु नै यसको उपलब्धी हुनेछ । यहाँ उत्सवको नाममा रमाइलो मनाउँदैमा मात्र उत्सव सफल हुन सक्दैन । जति उत्साह र उमङ्गले भरिएको छ, त्यति नै उनीहरूको जीवनमा उपलब्धी पूर्ण बन्न सक्नु पर्छ, अनि मात्र उत्सव सफल भएको मानिने छ ।
हिजो स्वास्थ्य महोत्सवमा हुँदै गर्दा यहाँका आम जनतामा जुन उत्साह र उमङ्ग थियो अब हुन लागेको बाल उत्सवमा पनि त्यस्तै उत्साह देख्न पाइयोस् । ताकि आउँदा पिँढीलाई त्यसले साथ दिनेछ । यसैले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्था विद्यालयमा रहेका बाल क्लब, विद्यालयहरूको सहभागितामा सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुने गरी यो महोत्सव सफल बनाऔँ त्यो नै हामी सबैको अनि हामी मेचीनगरबासीको कर्तव्य हुनेछ । बाल उत्सव सफलताको शुभकामना ।